Iindaba zesiXhosa, 12:00, 12 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 12:00, 12 eyoMdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 12/02/2019
Ifuna ukuva inkqubela yebutho elikhethekileyo ikomiti yesipolisa epalamente.
Ikomiti yepalamente kwisipolisa izakuva namhlanje ukuba lingakanani igalelo elenziwe kukutyalwa kwebutho elichasene nemigewu kwiindawo ezibolileyo yimigewu. Eli butho lisekwe ngenyanga yeNkanga kunyaka ophelileyo khon’ukuze liqubisane nokwanda kweziganeko zolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo kumaphondo amane eli lizwe. Kutyalwe amalungu eli butho kwiindawo ezithiwe mbende ngamandla lulwaphulo-mthetho kwiphondo leNtshona Koloni,eMpuma Koloni eGauteng naseFreistata. Imibutho yasekuhlaleni neekokheli zokuhlala eziphuma kula maphondo mane zizakunikezela ngobungqina phambi kwale komiti. Ukanti amalungu amanqwanqwa esipolisa ekuhlaleni, amaqela oluntu kwakunye neenkokheli zakwalizwi zizakuthetha malunga namava azo nenkxalabo ngokwayamene namagosa onyanzeliso-mthetho kwiindawo ezithwaxwa bubugewu. Usihlalo wekomiti yepalamente kwisipolisa umnumzana Francois Beukman ukholelwa ukuba igalelo labahlali liyafuneka kwidabi lokuqubisana nolwaphulo-mthetho lwemigewu.
Amashishini ayaqhwalela ngu danya-cimi wombane
Ibhunga lezorhwebo lelizwe loMzantsi Afrika livakalise inkxalabo emandla malunga nokumiliselwa kwesigaba sesine sikacimi-cimi wombane ngelithi ukungabikho kombane kuyawaqhwalelisa amanye amashishini. Eli bhunga lithi inyathelo lakutshanje lizakuthibaza ukukhula kwamanye amashishini nanjengoko oku kungabangela intandabuzo yokuba ezinye iinkampani zisenganakho kusini na ukunikezela ngeenkonzo ebezithembise ngazo. Igosa eliyintloko umnumzana Alan Mukoki uthi lo cimi-cimi umkhulu kangaka ubangela uphazamiseko kwimveliso kwaye oku kuzakuthibaza ukuveliswa kwemisebenzi. Uthi oku kubeka uxinezelelo olumandla kumashishini kwaye akwakhalazela ukungaziswa kwangethuba elaneleyo malunga nokucinywa kombane phof’kungekho siqinisekiso malunga nelixa lawo lokubuy
Isikhumbuzo sabahlali abakhutshwayo e District six
Ikomiti yezemisebenzi eDistrict Six ithi aliwaka amabango aphakathi komnyaka ka1995 no1998 angekasonjululwa. Le komiti ikuthethe oku kwisikhumbuzo seminyaka engamashumi amahlanu anesithathu yokukhutshwa kwabahlali baseDistrict Six ngosomvana ngomyaka ka1966 phantsi kwemithetho yocalu-calulo. Ukanti,uhlab’ikhwelo lentsebenziswano yabo bonke ababandakanyekayo ukujongana nokuqwalaselwa kwamabango abanye babafaki mabango baseDitrict Six usodolophu wesixeko seKapa umnumzana Dan Plato. UPlato ebengomnye wezithethi eziphambili kulo msitho. Bangaphezu kwamashumi amathandathu amawaka abantu abakhutshwa ngetshova kwezinye zeendawo zeeCape Flats kwaye ukuza kuthi ga ngoku zingaphezu kwekhulu elinamashumi amathathu iintsapho esele zibuyiselwe. UPlato uthi bonke ababandakanyekayo mababekele bucala ukungaboni-ngasonye basebenzisane ngokukuko.
Uyehla umthamo wamanzi kwelase Kapa
Umasipala wesixeko seKapa ubongoza abahlali ukuba basebenzise amanzi ngonophelo nanjengoko uye usehla umthamo wamanzi kumadama eli phondo. Kwingxelo ebhaliweyo isixeko sithi izinga lamanzi lehle ngo1.6 weepesenti kwiveki ephelileyo laya kuma kumyinge wamashumi amahlanu anesixhenxe nemivo emine ekhulwini. Oku kuthetha ukuba izinga lokusetyenziswa kwamanzi lenyuke ngeelitha ezizigidi ezilishumi elinethoba ngosuku lisiya kuma kumakhulu amathandathu anamashumi amathathu anesithathu eelitha ngosuku. Nangonanje imeko ingekho maxongo njengakumnyaka ophelileyo apho kwamiliselwa umlinganiselo kaLevel6B sele ngoku kumiliselwe u-Level 3. Oku kuthetha ukuba umntu ngamnye akufunekanga asebenzise iilitha ezingaphezu kwekhulu elinesihlanu ngosuku ze asebenzise ipheyile xa sukuba ehlamba isithuthi. Isixeko sithi kufuneka kusetyenziswe amanzi abesele esebenzile ukugungxula ngasese kananjalo akuvumelekanga ukusetyenziswa kwemibhobho yamanzi.
Liphumelele ityala lika Ma’Mbele awayemangelele uRAF
Uliphumelele idabi lakhe lenkundla nengxowa-mali yeengozi zendlela elifince iminyaka elishumi liqhuba, owasetyhini weli leKapa. Eli dabi layamene nesiganeko sango2010 apho umnumzana Simphiwe Makuotana owayesebenza kwizibuko laseKapa waphulukana nobomi kulandela ukugilwa kwakhe ngumatshini wokuphakamisa ii-container ezilayishwa kwiinqanawa. Inkosikazi yakhe uThandiswa Mbele yafaka ibango kodwa abakwaRAF balibhebhetha nalapho aye wabhenela enkundleni ngeligunyazisa ukuba le ngxowa-mali ihlawule umdliwo ngokuphulukana kwakhe nomyeni obelithemba lokukhulisa abantwana babo abathathu. OkaMbele uxelele inkundla ephakamileyo ukuba ukubhubha komyeni wakhe kubangelwe kukungakhathali kukaEugene Andrea obesebenza ngalo matshini ngethuba umnyeni wakhe egilwa yi-container. AbakwaRAF balibhebhetha eli bango ngelithi umatshini wokuphatha izinto ezinzima ezibukweni awusosithuthi nalapho ke lo wasetyhini asingise kwinkundla yezibheno yaza yagwebela ngakuye.
uPhando luyaqhuba malunga netyala likaBushiri
Isebe lezekhaya lithi liqhuba uphando malunga nekhaya lalowo uzibiza ngokuba nguMprofeti uSheperd Bushiri ozinze kweli loMdibaniso. UBushiri nenkosikazi yakhe uMary, abakhokele ibandla i-Enlightened Christian Gathering Church sele kuhanjwa kucelwa ngabo impunga kulandela ukubekwa kwabo amatyala obuqhetseba nonaniselwano ngemali. Aba nabangabemi belizwe laseMalawi bangaphandle ngebheyile yaye kulindeleke babuyele kwakho enkundleni ngenyanga kaCanzibe. Isebe lithi uphando malunga nekhaya likaBushiri kuhambelana nophando oluqhubayo. Lithi umnene lo uqale ungena kweli lizwe ngenyanga yoMsintsi ngo2009 waza kwakukhona athenga indlu esisigxina yokwenza ibandla ngoCanzibe ka2016.